Tẹsitamenti Ikne n'Ọnu Ikwere Filemọni 1
Filemọni bụ otu nye zị mkpa n'ọgbako Chiokike ke zị nụ Kọlosi, nye nwe ọhi ke rẹwhna a bụ Ọnesimosi. Ọhi ka hiri n'ọro nye nwe a gbawhu. Kpa ọ kpawhuru, ya nụ Pọlu nye zị n'ikelu whnụtaru. Hite n'aka Pọlu, Ọnesimosi ghọ nye Karaịsi. Pọlu gbaznennu Filemọni ọkwukwu izi ka naarịasno a, ọ kwubnahnarnụ ọhi a, nye Pọlu neezihnahienu a. Pọlu naarịasno a, ọ naabnarnụ a lele nnwọ nda nụ rime Karaịsi, ọ bụ́o lele ọhi.
Ọwhnun'anya Filemọni nụ ọkwnata ovu a (4-7)
Ọriasno nụ risi Ọnesimosi (8-22)
1 Mawa, Pọlu, nye ikelu kwnornu Karaịsi Jizọsi, nụ nwene aị rukna Timoti, naagbaznenu enyi aị nụ nye ẹrnu ibne aị, Filemọni, ọkwukwo izi. 2 A naagbaznenu masịnu nwene aị rinya Afịa nụ nye ọgwnu ibne aị Akịposi nụ ọgbako ke zị n'ọro ị. 3 Oru nụ udno ke Chiokike Nda aị nụ Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi dazịnu anụ.
Pọlu nọotunu Chiokike
4 M nọotunu Chiokike mmamma ige ọbula me neechenwanya ị n'okpukpe m, 5 kwnornu nụ m nọonu nhne gbasịri ọwhnun'anya i hne kpakara rụmu Chiokike zị nụ ọkwnata ovu i nụ Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi. 6 M neekpe ma ọkwnata ovu i nọornusi ẹrnu rikne n'esilawụru rụmu nda ma ị mahịa kpakara nhne ọma ke a nwernu a ji nọornu ẹrnu nụ rime Karaịsi. 7 Ọwhnun'anya i nyernu m mkpọma ọso n'ọnu k'agịda sụ nwene m rukna, bụ ke mernu ovu ele nsọ zịri bụdnu ikne, gbata kwno m inwe.
nụ risi Ọnesimosi
8 M nwernu m anya rikne nụ rime Karaịsi ọ kanụ ị mee nhne ke kwesiri. 9 Kọvu ọwhnun'anya mernu me rịasno i, lele ọkpa badnụ me bụ, Pọlu nye okno badnụ, kọvu kịtna, nye ikelu kwnornu Jizọsi Karaịsi. 10 M nọorio ị kwnornu Ọnesimosi nnwọ m rukna nụ rime Karaịsi, nye ghọru nnwọ m kpa me zị n'ikelu. 11 Nụ mbọm, ọ bnáge nụ nhne ọbula nyee i, kọvu kịtna ọ bnarnụ iru nyee i, ma mawa masị.
12 M neeziyanu ị ya hite n'ovu m, lele nye zị m okne mkpa. 13 O znernu amasị m ọ bịta a hna me zị ma o yinu m aka n'ọnodi ị kpa me zị n'ikelu kwnornu izi ọma. 14 Kọvu m jéeme nhne ovu i kwéle, kpa nhne ọma ọbula i jeeme jeehi n'ovu i whụya, ọ bụ́o nhne be kwnagidnernu i mee. 15 Ọ jọobu nụ Ọnesimosi whọgaru ige matị, ma i kwubnanya a n'ẹhni ị ọkwnukokwnu. 16 Ọ bụ́ma lele ọhi, o kakwo ọhi, kọvu lele nnwọ nda be whnụrnu n'anya. Ọ zị m mkpa k'ezi, kọvu ọ zị ị mkpa kakwo lele badnụ nụ lele nnwọ nda nụ rime Nyenwe aị.
17 Ọ bụru nụ i kwuru m nye ẹrnu ibne i, kwubnanya a lele kpa i jeegweru m. 18 Ọ bụru nụ o nwernu nhne ọjo ọbula mọbu ọgwo ke o ji i, gwnụsi a nụ risi m. 19 Mawa Pọlu, ji aka m naagba nhne ka, m jọokwu ị be. Ị magwụ nụ jị n'iwhuru i jigwu m ọgwo bụdnu i. 20 Bikno, nwene m rukna, menu m nhne ka kwnornu nụ Nyenwe aị, mee ovu sọ m n'ọnu lele nwene rukna nụ Karaịsi. 21 M tụkwasiri m mkpọma nụ ị joobno nsnị kpa me naagba ọkwukwo ka nụ i jeeme kakwo nhne me nọorio ị.
22 Kpam masị, bịtanu m otu ọnu ọro, kwnornu m neele anya nụ Chiokike jaaza kpakara okpukpe anụ mee m hiehnakwnusi anụ berere.
23 Epafarasị nye me nụ a zị n'ikelu kwnornu Karaịsi Jizọsi neebekwu i, 24 ma ele ẹrnu ibne m Makị, Arịsitakosi, Demasị nụ Lukwu. 25 Oru ke Nyenwe aị Jizọsi Karaịsi dazịnu enine anụ.